Myanmar Monk Student Association: May 2011
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ Nanika on Monday, 30 May 2011
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Oxford, London, Cambridge မြို့ကြီးများရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားလိုသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အခွင့်အလမ်း
နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက်သင်ကြားလိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် University Foundation Program များကိုဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသော YIUS ကျောင်းနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေဆိုက် Bellerbys College တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Oxford, University of Cambridge, University College London, University of Nottingham, University of Edinburgh, London School of Economics and Imperial College London အစရှိသောထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၅၀ ကျော်သို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက်နိုင်သော အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း ဟောပြောပွဲကို အဆိုပါကောလိပ်မှ Ms. On-In Pipatchaisiri ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆွေးနွေး ဟောပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဝန်ဖြစ်လိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အတွက် Bellerbys College တွင် Oxbridge & Medical Preparation တက်ရောက်ပြီး ထိပ်တန်း Medical school များသို့တိုက်ရိုက် သွားရောက်နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ရှိပြီ ဖြစ်သော Bellerbys College မှထူးချွန်စွာအောင်မြင်သော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်နှစ်ခုဖြစ်သော University of Oxford နှင့် University of Cambridge တွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြား လျှက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ Bellerbys College တွင် Engineering & Computer Science, Management Computing Systems, Humanities, Law and International Relations, Chemical Engineering, Science and Pharmacy ( Pre-Medical ), Business, Finance and Management, Media, Art & Design အစရှိသော ဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ထူးချွန်သောကျောင်းသားများ အတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များမှ ပေးအပ်သော UK Scholarships and Bursaries 2011-12 ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မေလ ၂၈ ရက်၊ စနေနေ့ နေ့လည် (၁) နာရီ မှ (၃) နာရီ ထိ TRADER HOTEL ကုန်းဘောင်တကောင်းခန်းမ တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ၊ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ဆဲ နှင့် ဘွဲ့ရပြီးသောကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၊ မိဘများပါ အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် မိဘများ YIUS ကျောင်းတည်ရှိရာ အဆောင်(၇)၊ အခန်း ( ၄)၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်သို့ လူကိုယ်တိုင် ( သို့ ) ဖုန်း ၆၅၂၃၁၁၊ ၆၅၂၂၉၇၊ ၀၉-၇၃၁၄၈၇၃၉ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
UK ၏ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု စတင်နေသည့် အတွက် Tourism နှင့် Hospitality ဘာသာရပ်အား စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အထူးအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပေါ်များလာကြောင်း Study Abroad မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
Tourism နှင့် Hospitality ဘာသာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုလာနိုင်ခြင်း အကြောင်းများတွင် ဥရောပ၏ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ယိမ်းယိုင်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် လန်ဒန်ရှိ ဟော်တယ်များမှာ အရှိန်ကောင်းဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် international student များအတွက် work placement ဆင်းနိုင်ခွင့်များ ရလာနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ “လန်ဒန်မှာဟော်တယ် လုပ်ငန်းတိုးတက်လာတာဟာ အလားအလာကောင်းတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ International Student များအတွက် Hotel တွေခပ်များများဖွင့်ထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ယူနေခြင်းဟာ Work Placement ဆင်းဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေရှိလာတာပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့လည်းဒါကို သိထားသင့်ပါတယ်” ဟု Study Abroad မှ မစိုးစိုးသန့်က ရှင်းပြသည်။ “work placement နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိတဲ့ ကျောင်းတွေ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။ အဲဒိထဲမှာ Ealing, Hammersmith & West London College သည် Government Funded College ဖြစ်ပြီးတော့ England နိုင်ငံရဲ့ ဒီနေ့ခေတ်စီးပွားရေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အပြင် ကျောင်းပြီးသည့်အခါမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင်သို့ အခက်အခဲမရှိဝင်နိုင်ပါတယ်။ Postgraduate Diploma in Hospitality & Leadership Management, Postgraduate Diploma in Cullnury Arts & Kitchen Management, MBA in Hospitality Management တို့ကို လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပိုမိုရရှိနိုင်မှာပါ” ဟု Study Abroad မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ရှင်းပြသည်။
PSB Academy မှ 2011 အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ကျောင်းဝင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဖြေဆိုခွင့် . အစီအစဉ်နှစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာ .
PSB Academy မှ 2011 အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ကျောင်းဝင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဖြေဆိုခွင့် .
အစီအစဉ်နှစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာ . . . . . . . . . . . ..f . . . . . . . . . .
“Best Singapore Experience Award 2010” ဆုရရှိထားသော PSB Academy ကျောင်းသည် ယခုအခါတွင်လည်း ဒုတိယအကြိမ် အစီအစဉ်အနေဖြင့် GCE “O” Level / IGCSE ကျောင်းသားများ အတွက်သာ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Search International (MSI) ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီမှ သိရှိရပါသည်။ PSB Academy ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲသည် GCE “O” Level / IGCSE အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်တွင် အနိမ့်ဆုံး Grade C မရှိသော ကျောင်းသားများအတွက် Foundation, Diploma ကို တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ PSB Academy ၏ အင်္ဂလိပ်စာဖြေဆိုခွင့် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မှာ GCE “O” Level / IGCSE တွင် အနိမ့်ဆုံး Grade D or E ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်တွင် Grade F နှင့် တခြားဘာသာရပ်များတွင် Grading ကောင်းကောင်းရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစာမေးပွဲကို Foundation နှင့် Diploma, Certificate Programs များအတွက် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရှိမည်။ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် Grade U (Unknown) အဆင့်ရရှိထားသော ကျောင်းသားများ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်မရှိကြောင်းသိရသည်။ ထို့ပြင် PSB Academy ကျောင်းသို့ လျှောက်ထားရာတွင် 2011 ခုနှစ် မတ်လ (၁၆) ရက်၊ တနင်္လာနေ့မှ မတ်လ ၂၃ ရက်၊ တနင်္လာနေ့အထိ ကျောင်းလျှောက်လွှာများကို ကျောင်းဝင်ကြေး “စင်ကာပူဒေါ်လာ 353 ” ပေးသွင်းစရာမလိုပဲ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ PSB Academy ကျောင်းကို အမှန်တကယ်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသာ အထက်ပါအစီအစဉ် နှစ်ရပ်၏ အကျိုးကျေးဇူးကိုရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း MSI မှ သိရှိရပါသည်။
၎င်း GCE “O” Level နှင့် IGCSE တို့တွင်ဘာသာရပ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်ဝန်းကျင်ရှိရာ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားအများဆုံး စိတ်ဝင်စားဖြေဆိုသော ဘာသာရပ်မှာ (၁၁) ဘာသာရပ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြောင်း ၎င်းဘာသာရပ်များမှာ - English, Maths 1, Maths 2, Physics, Chemistry, Biology, Accounting, Economics, Computing, Commerce, Human Bio ဖြစ်ကြောင်း၊ GCE “O” Level တွင် Cambridge နှင့် Ederxcel နှစ်မျိုးရှိရာ Singapore နိုင်ငံကို ကျောင်းတက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသော ကျောင်းသားများသည် ဦးစားပေး Cambridge ကို ဦးစားပေးဖြေဆိုကြကြောင်း MSI မှ Managing Director ဒေါ်စုစုလှိုင်ထံမှ သိရှိရပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် အချိန်နှင့် နေရာသတ်မှတ်ချက်မှာ - မန္တလေးမြို့တွင် ၂၂ ရက်၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့) ၊ နံနက် ၁၁ နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀ ရက်၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၁ (သောကြာနေ့) နံနက် ၁၀ နာရီ မှ မွန်းလွဲ ၁၁ နာရီ ထိကျင်းပပါမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများနှင့် တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးမည့်သူများသည် MSI ရုံးခန်း၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁- ၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သို့ ကြိုတင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းစာရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်
ပြည်တွင်းရှိ လူမှုလုပ်ငန်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်သူများမှ နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၅ ဦး အနက် ဆန္ဒမဲအများဆုံး ရရှိသူတဦးကို ရွေးချယ်ကြသည့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်ကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့ကကျင်းပပြီး ဒေါ်ရှု ကို ဆန္ဒမဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြု အစီအစဉ်၏ နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် ၅ ဦးစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပြီး မေလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ညသန်းကောင်ယံအချိန်အထိ အင်တာနက်မှတဆင့် အများပြည်သူထံက ဆန္ဒအရှိဆုံး မဲများကို လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး စာရင်းပိတ်ပြီးနောက် စုစုပေါင်း လက်ခံရရှိသည့် မဲအရေအတွက်ကို Westwood College – Prof. R. Hoo ခေါင်းဆောင်သည့် စိစစ်ရေးအဖွဲ့က အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မဲပေးကြသည့် နိုင်ငံစုစုပေါင်း = ၄၀ နိုင်ငံ
ဆန္ဒမဲလာရောက်ပေးကြသည့် ဧည့်ပရိသတ် ဝင်ရောက်မှု အများဆုံး နိုင်ငံများမှာ -
၃။ ထိုင်းနိုင်ငံ - ၆.၄၆ %
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ (၀၁) ၆၂၆ ၄၇၈ ၇၇၁၇၊ ကိုလေး (၀၁) ၆၂၆-၃၈၃-၆၉၀၁၊ ကိုဝေလ (၀၁) ၆၄၆-၄၆၂-၉၀၁၇၊ ကိုထိန်လင်း (၀၁) ၄၁၅-၅၃၁-၃၇၆၁၊ ကိုဂျေစင် (၀၁) ၅၁၀-၄၀၂-၇၇၇၉
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Sunday, 15 May 2011
IELTS ( International English Language Testing System) ဖြေလိုသူများ သိထားရန်
ကမ္ကာနိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကျော်က တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်များ အသိအမှတ်ပြုထားသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စစ်ဆေးမှု စာမေးပွဲ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားတွင် အလုပ်လုပ်ရန် နှင့် ပညာသင်ကြားရန်ရည်ရွယ်ထားသော သူများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုလေး ရပ်ဖြစ်သော ဖတ်ရှုခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း နှင့်ပြောဆိုခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲဖြစ်သည်။ IELTS သည် ၁၉၈၉ခုနှစ် လောက်မှစ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်း အတွက် စစ်မှန်၍ အများယုံကြည်စိတ်ချရ သော Test တစ်ခုဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်ကမ္ကာပေါ်တွင် IELTS စာမေးပွဲဖြေဆိုသူပေါ်င်း ၅ သိန်းကျော်ရှိပြီး IELTS စာမေး ပွဲအတွက် သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ် တီထွင်မှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ IELTS စစ်ဆေးမှုတွင် ဂရိတ်အားဖြင့် ၆.၀ နှင့်အ ထက်ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အောင်လက်မှတ်သက်တမ်းမှာ (၂)နှစ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် IELTS စာမေးပွဲများကို ကြီးကြပ်ကျင်းပ ပေး ရန်အတွက် ဗြိတိသျှ စာစစ်အဖွဲ့မှ ဗြိတိသျှကောင်စီကို အသိအမှတ်ပြုပေးထားပြီး စာမေးပွဲများကို ပုံမှန် ကျင်းပပေးနေသည်။
Listening (Time: 30 Minutes)
စာမေးပွဲဖြေဆိုသူသည် အသံသွင်းထားသော စာသားများကို နားထောင်ရမည်။ စာသားများသည် ပို၍ပို၍ ခက်သွားသည်။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးပြောဆိုသောစ ကားများ၊ လေယူလေသိမ်းနှင့် အသံထွက်ကွဲပြားမှု အမျိုးမျိုးများ ရောနှောပါဝင်သည်။ အသံသွင်းထားသည်ကို တစ်ကြိမ်သာ နားထောင်ရသည်။ စာမေးပွဲဖြေ သူကို မေးခွန်းများဖတ်ရန် နှင့် အဖြေကိုရေးရန် အချိန်သီးသန့်ပေးသည်။
Academic Reading (Time: 60 Minutes)
အပိုင်းသုံးခုပါဝင်သည်။ ဖတ်ရန်အတွက် စာတို့မှာ စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ဂျာနယ်များနှင့် သတင်းစာများမှ ထုတ်ယူထားသည်။ အနည်းဆုံး တစ်ပိုင်းတွင် အသေးစိတ် အငြင်းအခုံ (Argument) ပါဝင်သည်။
General Training Reading(Time: 60 Minutes)
အင်္ဂလိပ် စကားပြောနိုင်ငံတို့တွင် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရမည့် ကိစ္စတို့နှင့် ပတ်သက်သော စာသားအသုံးအနှုန်းများကို အခြေပြုထားသည်။ ၎င်းစာသားတို့ကို သတင်းစာ များ၊ ကြော်ငြာများ၊ စာအုပ်များ၊ လမ်းညွှန်စာအုပ်များမှ ရယူထားပါ သည်။ စာဖြေသူအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်တိုိ့ကို နားလည်နိုင်စွမ်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်စွမ်း တို့ကို စစ်ဆေးသည့် သဘောဖြစ်သည်။ စာပိုဒ်တို့မှာ ရှည်ရှည်လျားလျားရှိသော စာသားတစ်ခုပါဝင်သည်။ ၎င်းသည့် အငြင်းအခုံပြုခြင်းထက် ရှင်းပြသည့်သ ဘော ပိုမိုသက်ရောက်သည်။ လက်တွေ့ အသုံးပြုပုံ ညွှန်ပြသည့် သဘောဆောင်သည့် စာသားဖြစ်သည်။
Academic Writing (Time: 60 Minutes)
စာဖြေသူသည် စာလုံးရေ ၁၅၀ ခန့်ရှိသော အစီရင်ခံချက် (Report) ကို ပေးထားသည့် ဇယားနှင့် ပုံတို့ကို ကြည့်ပြီး ရေးရသည်။ အချက်အလက်ကို ရှင်းပြနိုင် စွမ်းကို စွမ်းရည်ပြသ ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ရေးရသည့်အလုပ်မှာ စာလုံးရေ ၂၅၀ ခန့်ရှိသော စာစီစာကုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းစာစီစာကုံးကို တွေးဆချက် သို့မဟုတ် ပြဿနာတစ်ခုအပေါ် တုံ့ပြန်စဉ်းစားပြီး ရေးသားရသည်။ ကိစ္စတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်း၊ အငြင်းအခုံပြုနိုင်စွမ်းတို့ကို စွမ်းရည်ပြသခိုင်း ခြင်းဖြစ်သည်။
General Training Writing (Time: 60 Minutes)
သတင်းအချက်အလက်ကို ဖြစ်စေ၊ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်ကို ရှင်းပြရန်ဖြစ်စေ၊ တောင်းဆိုမေးမြန်းသော စာတစ်စောင်ကို ရေးသားရမည်။ နောက်ထပ် ရေးသား ရမည့် အလုပ်မှာ စာလုံးရေ ၂၅၀ ခန့်ရှိသော စာစီစာကုံး အတိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေးထားသော ထင်မြင်ယူဆချက် သို့မဟုတ် ပြဿနာအပေါ် တုံ့ပြန်ရေးသား ရမည်။ စာဖြေသူ အနေဖြင့် မိမိ၏ အိုင်ဒီယာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် သူတစ်ပါး၏ အိုင်ဒီယာ စိတ်ကူးစိတ်သန်း တို့ကို စိန်ခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အရေးအသား ကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
Speaking Speaking (Time: 11-14 Minutes)
စာစစ်သူနှင့် စာဖြေသူတို့ နှုတ်ဖြင့် မေးမြန်းဖြေဆိုသော စာမေးပွဲဖြစ်သည်။ အပိုင်း ၃ ပိုင်းပါဝင်သည်။ အပိုင်း(၁)တွင် မိမိနှင့် မိမိအိမ်၊ မိမိမိသားစု၊ သူတို့၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပညာသင်ကြားမှု အစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက် သော မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရပါသည်။ အပိုင်း(၂)တွင် မိမိပြောဆိုရမည့် အချင်းအရာအတွက် ရေးပေးထားသည့် ကတ်ပြားကို ဖတ်ရှုပြီး၊ ပြောဆိုဖြေကြား ရပါသည်။ အပိုင်း(၃)တွင် စာမေးသူနှင့် စာဖြေသူတို့သည် အပိုင်း၂တွင် ဖြေဆိုခဲ့သည့် အချင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြောဆို ရမည်ဖြစ်သည်။
(1)2passport-sized photos
(2) Original NRC Card/Passport, andacopy of it.
TOEFL (Test of English asaForeign Language) ဖြေလို့သူများ သိထားရန်
၎င်းစာမေးပွဲသည် အမေရိကန်-အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းများကို စစ်ဆေးသောစာမေး ပွဲဖြစ်သည်။ Non Profit Organization (NGO) ဖြစ်သော ETS (Education Testing Service)မှ ကျင်းပပေးသည်။ ထိုစာမေးပွဲကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်လောက်မှစ၍ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ နိုင်ငံပေါင်း(၁၁၀) ကျော်က အသိအမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့သည်။ စာမေးပွဲရမှတ်ပေါင်း ၅၅၀ ထက်မနိမ့်ကျရန် လိုအပ်ပြီး အောင်လက်မှတ်သက်တမ်းမှာ (၂)နှစ်ဖြစ်သည်။ ယခင်က Computer-Based (CBT)နှင့် Paper-Based (PBT) နှစ်မျိုးသာရှိရာမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် Internet based ပာုခေါ်သော (IBT) ကိုအမေရိကန် ၊ကနေဒါ၊ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့် အီတလီတို့တွင် စတင်အသုံးပြုပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်၌ တစ်ကမ္ကာလုံးတွင် အသုံး ပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် TOFEL စာမေးပွဲများကို အမေရိကန် စင်တာတွင် ပုံမှန်ပြုလုပ် ကျင်းပလျှက်ရှိသည်။
သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွက် MDIS မှ ကျောင်းအပ်ရန် လျှောက်လွှာများစတင်လက်ခံ
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Management Development Institute of Singapore (MDIS) မှ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာများကို စတင်ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ MDIS သည် စင်ကာပူအစိုးရအသိအမှတ်ပြု Edu Trust နှင့် Singapore Quality Class (SQC) လက်မှတ်ရရှိထားသော ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Information Technology, Business, Life Sciences, Media & Communication, Tourism & Hospitality, Engineering စသည့် Program များကို Certificate Level မှစ၍ Master Level အထိ တက်ရောက်နိုင်ပြီး၊ UK, Australia, France, USA စသည့် နိုင်ငံများရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနှင့် အဆိုပါနိုင်ငံမှ ဘွဲ့ကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ MDIS တွင် Professional Certificate in English Programme ရှိသောကြောင့် IELTS/ TOEFL အမှတ်မရှိသူများလည်း လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်းသိရသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို KMD ၏ Overseas Studies Counseling Service ဖုန်း - ၃၈၁ ၇၇၆၊ ၃၈၁၁၂၉ တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။